1xbet nbanye na kabinet nkeonwe, banye site na mobile ngwa 1xbet
Banye na kabinet 1xbet
Bettingwa nke ịkụ nzọ dị iche iche na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ịkụ nzọ na-eto kwa afọ, ma ọ dịghị onye ọkpụkpọ na-agaghị ama ụlọ ọrụ 1xbet. Companylọ ọrụ a ekwupụtala na ọ kachasị:
Pụrụ ịdabere – ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ịkwụ ụgwọ mmeri nye ndị egwuregwu ruo ego nke ụlọ ọrụ setịpụrụ karịa 1 nde rubles
Anụ – ebe a egwuregwu ga-ahụ ndị kasị ewu ewu ịkụ nzọ
Iche – ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọ bụghị naanị ịkụ nzọ egwuregwu, kamakwa ịkụ nzọ na sweepstakes, ịkụ nzọ dị n'ihe ngosi, casinos n'ịntanetị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ka ndị egwuregwu wee malite ịkụ nzọ, ịkwesịrị ịmepụta akaụntụ nkeonwe, ime nke a, ị ga-ebu ụzọ gaa usoro ndebanye aha na otu n'ime usoro ndị a chọrọ:
Site na adreesị ozi-e
Site na netwọkụ mmekọrịta (Vkontakte, Ozi Google, Odnoklassniki)
Isi ọrụ nke ụlọ ọrụ onwe onye
Personal kabinet ke ọrụ dị ka mfe dị ka o kwere, ọ na-ewetara akụkụ ndị a:
Data nkeonwe – nke a bụ ozi niile gbasara akaụntụ onye ọkpụkpọ ahụ, ozi nkeonwe ya na adreesị ozi-e nke e debanyere aha akaụntụ ahụ. Ọzọkwa, na nkebi nke a ọkpụkpọ nwere ike ịgbanwe ihe ọmụma banyere onwe ya, ntọala ntọala na paswọọdụ.
LỌ – Ke ikpehe emi, a na-enye ndị na-egwu egwuregwu ohere ịgbanwe ihe ndị a kwakọbara maka ihe nrite ndị bara uru site n’aka ụlọ ọrụ nke onye na-ede akwụkwọ. Iji atụmatụ a, mkpa ka ị dejupụta ụdị ma jikọọ Ego Ego Ego.
Mmemme mmemme – na nkebi a ị nwere ike imechi nkwekọrịta imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ ahụ. Iji mee nke a, ịkwesịrị inwe weebụsaịtị ma ọ bụ ibe na netwọkụ mmekọrịta metụtara egwuregwu.
Mmezu gị – ebe a ị pụrụ ịhụ ọnụ ọgụgụ na mmeri nzọ na egwuregwu niile na nzo nke ihe ọkpụkpọ abuana.
Mejupụta akaụntụ gị – Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ a, menu ga-emeghe nke ị nwere ike ịhọrọ otu esi etinye ego, enwere nhọrọ ndị a: kaadị akụ, Yandex.Money, WebMoney, ndị ọrụ ekwentị, cryptocurrencies.
Wepụ ego – ebe a ihe niile doro anya, site na enyemaka nke ngalaba a, ndị egwuregwu nwere ike ịdọrọ ego ha meriri.
Site na akaụntụ nkeonwe ọ ga-ekwe omume ịfefe ego na enyi, iji ọrụ a ọ dị mkpa iji nye ikike nọmba ekwentị mkpanaaka gị na saịtị ahụ. Nke a dị mkpa n'ihi na ekwenyela nyefe site na sms-code. Ọ dị mma ịmara na ọ bụghị ndị na-eme akwụkwọ nwere ọrụ a.
Na mgbakwunye, n'ime ụlọ ọrụ nkeonwe ị ga-ahụkwa ngalaba dịka “Ntọala” n'ime ya ị nwere ike ịrụ ọrụ ọkọlọtọ nke ga-eme ka ịkụ nzọ dị mfe, ndị egwuregwu nwere ike ịdenye aha na akwụkwọ akụkọ na nkwalite.
Ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ ịkụ nzọ 1xbet bụ na mgbakwunye na ọrụ ndị a na-emebu, egwuregwu nwere ike ịnweta ọrụ ahụ “Ahịrị” na “Na-ebi ndụ”, nke pụtara na onye ọrụ nwere ike itinye egwuregwu kachasị amasị ha na Ọkacha mmasị ka ịnweta ha mgbe niile.
Otu esi abanye na 1xbet site na saịtị gọọmentị
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, igwu egwu site na saịtị gọọmentị bụ naanị ụzọ, n'ihi na nbudata na ịwụnye ngwa na mmemme ndị ọzọ maka ndị egwuregwu na-enwe nsogbu. Ya mere, iji nweta akaụntụ nkeonwe site na saịtị gọọmentị, naanị ị chọrọ ịbanye ma debanye aha, otu n'ime ụzọ ndị a:
N'otu pịa – ịdenye aha n'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịbanye n'ụlọ ọrụ gị, ma ị pụghị ịkụ nzọ ma kpọọ cha cha chara n'ịntanetị, yana ịkụ nzọ na ebe zọchara ụkwụ, n'ihi na nke a bụ ụzọ ndebanye aha na-ezughị ezu.
Site na akara ekwentị – ebe a ị ga-mkpa ejikọta ekwentị mkpanaaka gị na nọmba ma na-egosi ndebanye na ihe SMS-ozi ga-abịa kpọmkwem nọmba.
Netwọk mmekọrịta – ịkwesịrị ịhọrọ ikpo okwu: VKontakte, Odnoklassniki na Google Mail na njikọ akaụntụ site na itinye paswọọdụ na nbanye site na netwọk mmekọrịta. Uru nke usoro a bụ na ị gaghị achọ itinye data ịbanye, ị ga - pịa pịa akara ngosi nke netwọkụ ị debanyere aha na ya.
Site na adreesị ozi-e – nanị tinye @mail ma gosi aha site na ịpị njikọ ga-abịa na leta ahụ.
Banye na kabinet onwe gị 1xbet site na ngwa ahụ
Ngwa ahụ bụ nnukwu gbakwunyere maka ndị egwuregwu ahụ, ọ nwere otu akụkụ ahụ dịka saịtị ọrụ, naanị ngwa dị mma karịa peeji dị na Internetntanetị. Ngwa a nwere uru ndị a:
Ndị na-egwu egwu ga-enwe ike ịnweta ngwa ahụ ebe ọ bụla n'ụwa ebe ịntanetị dị
Ndebanye aha ngwa ngwa, nke nwekwara ike mere na ngwa
Ike ịkwụnye na ịdọrọ ego na akaụntụ egwuregwu
The ngwa na-arụ ọrụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa karịa ukara website peeji nke
Njikwa akaụntụ zuru ezu
Ọ dị ezigbo mfe usoro ịkụ nzọ dị mfe
Chekwa akụkọ ịkụ nzọ dị iche iche
Ngwa ngwa dị maka ekwentị na mbadamba
Na mgbakwunye na ịkụ nzọ egwuregwu ndị a na-emebu, ndị egwuregwu nwekwara ike ịchọta taabụ ndị ọzọ na ngwa ahụ, ya bụ:
Gba nzọ na ngụkọta ngwugwu
Onye na-ewu ụlọ
Ọtụtụ ikike dị iche iche Akụkụ ọnụ ọgụgụ ezughị ezu
Gba nzọ na ọnụ ọgụgụ Enwere ike ịgbanye ọtụtụ mgbasa ozi n'ịntanetị n'otu oge
Ikwurita okwu na onye njikwa nkwado oru
Ike isonye site na ngwa ahụ na ego na nkwalite
Enwere ike iji mmemme ahụ site na ngwaọrụ ọ bụla, eji android na iphone, ngwa ahụ achọghị mmelite ngwanrọ kachasị ọhụrụ, dị nnọọ free ohere na ngwaọrụ gị.
Mepụta akaụntụ nkeonwe na ekwentị mkpanaaka ga-eme ka ọrụ ahụ dị mfe, n'ihi na ebe a ihe niile dị mfe karị, site na nhazi nke taabụ na nzọ.